Gba alụ nwanyị ọhụrụ na nlekọta ahụ ike na Gris oge ochie | Njem zuru oke
N'ikwekọ n'ụkpụrụ nke nkà ihe ọmụma oge ochie, na omume ọma nke Gris na ịma mma na ilekọta ahụ. Oge ahụ, a synonym nke ịbụ ezigbo nwa amaala na-enwe a ọma-elekọta ahụ ma zụọ ya nke ọma. Menmụ nwoke na-emega ahụ ọtụtụ awa na mgbatị iji nweta ọdịdị oge ochie nke ịma mma dabere na nkwekọ na ahụ egwuregwu.
Ndị Grik, na mgbakwunye na idobe ahụ ha na ọnọdụ anụ ahụ nke ọma site na mmemme mmega ahụ siri ike, nwekwara ha lekọtara onwe ha nke ọma banyere ịdị ọcha onwe onye. Mgbe ha mechara mgbatị ahụ, ha gbasoro emume mkpocha akpụkpọ ahụ ruo n'ókè nke ịgbanye ofufe nke ịma mma n'ime otu ogidi nke ọdịbendị ha, nke nwere mmetụta ya na mmepeanya ndị ọzọ.
Ke ibuotikọ emi anyị nyochara ihe ejiji na nlekọta ahụ gụnyere na Gris oge ochie. Want chọrọ ịmatakwu? Nọgide na-agụ!
1 Toiletlọ mposi na Gris oge ochie
2 Ebe ịsa ahụ ọha na eze na Gris oge ochie
3 Mụ nwanyị na baths nke ọha nke Atens
4 Ezigbo nke mma nwanyị na Gris oge ochie
5 Nlekọta ntutu n'oge ochie
6 Iwepu ntutu na ụwa oge gboo
7 Na ejiji omenala ndị ọzọ
Toiletlọ mposi na Gris oge ochie
Anyị nwere ike ịhụ na eserese nke amphoras nke dịgide ruo taa ndị Gris oge ochie na-echegbu onwe ha banyere inwe ahụ ike na ahụ ike, ya mere ha mere mmemme mmega ahụ iji nweta ahụ kwekọrọ ma maa mma.
Na amphoras, ọ bụghị nanị na ndị na-eme egwuregwu na-anọchi anya na-eme egwuregwu kamakwa ha na-eme ememme nhicha na ilekọta ahụ sochirinụ. A na-ese ha na ihe ndị mara mma ha, dịka ọmụmaatụ obere ihe nwere mmanụ na-esi ísì ụtọ nke eyịruru na mgbidi ma ọ bụ kegide na nkwojiaka nke ndị na-eme egwuregwu.
Ejiri Ash, ájá, nkume pumice na rose, almọnd, marjoram, lavender na mmanụ cinnamon na-eme ka akpụkpọ ahụ dị ọcha mgbe mmega ahụ gasịrị. dị ka mmiri dị ọcha, colognes na deodorant. Ngwa ọzọ ha na-ejibu bụ ogologo ogologo ogologo mbadamba, nke dị mbadamba iji wepu ájá na mmanụ karịrị akpụkpọ ahụ.
N'ebe ngosi ihe mgbe ochie nke Gris ị nwere ike ịhụ ụfọdụ n'ime ite ndị ejiri iji chekwaa isiokwu ndị a na ngwaahịa nhicha. Ha bụ arịa ndị e ji ụrọ ma ọ bụ alabasta mee bụ́ ndị a na-achọ mma na ha n'ụdị dị iche iche.
Ebe ịsa ahụ ọha na eze na Gris oge ochie
Amaara na baths ọha na eze dị na Atens kemgbe narị afọ nke ise BC, ebe ndị mmadụ gara mgbe ha megasịrị ahụ́, ọ bụghị naanị iji saa ahụ kamakwa, ka ha na ndị ọzọ jiri ya na-ekwurịta okwu, ebe ọ bụ na a na-ewere ha dị ka ebe ndị a ma ama na-enwe nzukọ.
Ebe ịsa ahụ ọha na eze nke Gris oge ochie bụ nnukwu oghere nke nwere ọtụtụ narị mmadụ ma kewaa ya n'ọtụtụ mpaghara. Mbụ ị nweta frigidarium (ime ụlọ nwere mmiri oyi iji saa ahụ ma wepụ ọsụsọ), mgbe ahụ ọ bụ ntụgharị nke tepidarium (ime ụlọ nwere mmiri ọkụ) n'ikpeazụ ha gara caldarium (ime ụlọ na sawụna).
Ndị dọkịta nke oge ahụ tụrụ aro ịsa mmiri mmiri oyi n'ihi na ha na-eme ka ahụ na mkpụrụ obi dị ọhụrụ mgbe a na-eji ịsa ahụ na-ekpo ọkụ mee ka anụ ahụ dị mma ma mara mma.
Ozugbo emechara ahụ ịsa ahụ, ndị sava ahụ wepụrụ adịghị ọcha ha na akpụkpọ ahụ wee mee ha. Mgbe ahụ, ndị masse ahụ na-etinye aka, ndị na-ete mmanụ na-esi ísì ụtọ n'ahụ ha iji mee ka ahụ ha dị jụụ.
Mụ nwanyị na baths nke ọha nke Atens
N’ebe ịsa ahụ́ ọha mmadụ nke Gris oge ochie e nwere ebe ndị a kwadebere nanị maka ndị inyom, ọ bụ ezie na ndị Atena dị umeala n’obi na-agakarị ha ka ndị inyom nọ n’ọkwá dị elu na-asa n’ụlọ ha. Ha na-asa ahụ ha ji terracotta ma ọ bụ okwute ndị ahụ e ji aka saa mmiri.
Ezigbo nke mma nwanyị na Gris oge ochie
Okwu ịchọ mma sitere na Greek nke putara "ihe eji edozi ihe na idi nma nke aru" karisia banyere ihu.
Ihe nnọchianya nke ịma mma maka ụmụ nwanyị Greek bụ ịma mma na-enweghị atụ. A na-ahụta akpụkpọ anụ ọcha dị ka ihe na-egosi ịdị ọcha na oke agụụ yana ndụ ọgaranya dị ka akpụkpọ anụ tanned na-amata na klaasị dị ala na ndị ohu, ndị nọrọ ogologo oge na anyanwụ na-arụ ọrụ.
Iji jigide anụ ahụ dị nro, ha na-eji ngwaahịa ndị dị ka nzu, opupu ma ọ bụ arsenic. Ha tinyere blush na-acha beri na ntì ha, ọ bụ ezie na ọ bụ etemeete dị mfe ka ịma mma okike dị, n'adịghị ka ụmụ nwanyị ụlọ ọrụ jiri agba ndị siri ike karị.
Nlekọta ntutu n'oge ochie
Banyere ntutu isi, ma ndị nwoke ma ndị nwanyị tere ntutu ha mmanụ ma fụchie ha n'ihi na a lere ụdị a anya kachasị mma n'oge ahụ. Ndị Gris hụrụ n'anya mmegharị nke ebili mmiri na curls gosipụtara. Ndị ohu ahụ na-elekọta ntutu isi nna ha ukwu zuru oke. N’ezie, a na-ahụ ụfọdụ ntutu dị iche iche ndị Gris oge ochie na-eyi n’ihe a kpụrụ akpụ rue taa.
Womenmụ nwanyị nke ụlọ akwụkwọ dị elu dị iche na ndị ohu na ntutu ha n'ihi na ha na-eji ntutu isi dị egwu ma ha na-achịkọta ogologo ntutu ha na ụta ma ọ bụ braids nke ejiri ụta na obere eriri chọọ mma. Naanị n’oge iru uju ka ha na-egbutu ya ntakịrị. N'aka nke ha, ụmụ nwanyị na-adịchaghị ala na-eyiri ntutu ha mkpụmkpụ.
E kwere ka ụmụaka tolite ntutu ha ruo oge uto, mgbe e bepụrụ ya iji chụọ chi ha. Menmụ nwoke na-aga na ntutu isi oge ụfọdụ ma malite ịkpụ afụ ọnụ ha na afụ ọnụ ha ruo mgbe Alexander Onye Ukwu gachara. Ihe ohuru ozo nke biara na eze Macedonian n'ihi mmeri ya na East bu akwa ntutu.
Na Gris oge ochie agba odo na-egosipụta ịma mma na njupụta ya. Iji yie Achilles na ndị dike ndị ọzọ n’akụkọ ifo ndị Gris, ndị mmadụ chepụtara ụzọ isi mee ka ntutu ha dị nwuo dị ka mmanya, ihe ọ lemonụ lemonụ lemon na saffron.
Iwepu ntutu na ụwa oge gboo
Iji wepu ntutu anụ ahụ, ụmụ nwanyị na-eji agụba eme ihe ma jiri pases pụrụ iche ma ọ bụ kandụl wee mee ya.. Ndị Gris oge ochie lere ya anya dị ka ihe dị oke mkpa iwepu ntutu isi dị ka ahụ ewepụrụ bụ ihe nnọchianya nke ịdị ọcha, ntorobịa na ịma mma.
Ejiri iji ịhịa aka na mmanụ na ihe na-esi ísì ụtọ mee ka ihe na-eme ka ahụ dị mma. Emere ememe a site na kosmetés na ebe a na-emega ahụ, ndị bụ ụzọ nke mbụ salons.
Na ejiji omenala ndị ọzọ
Site na imeri Byzantium, Egypt na Syria, ndi Alakụba ketara ịhụnanya ha banyere ịsa ahụ n'aka ndị Rome na ndị Kristian Byzantine.
Na mbu, na ọdịnala Alakụba echere na okpomoku nke hammam mụbara ọmụmụ na, yabụ, mmeputakwa nke ndị kwere ekwe. Yabụ ndị Arab kwụsịrị iji mmiri si frigidarium (ime ụlọ oyi) na-asa ahụ ma jiri naanị nke tepidarium na caldarium.
Yabụ na mba Arab, hammams bụkwa ebe dị mkpa maka nnọkọ oriri na ọ socialụ socialụ ha wee guzo n’ọnụ ụzọ ámá ndị alakụba. Itie oro enye akasan̄ade ebe ke mmọ eketie nte ediben̄e idem ye edinam asana man ika temple.
Ọ dabara nke ọma emume a maka ịlụ nwanyị a mụrụ na Gris oge ochie ma chekwaa site na mba Alakụba ka dị ruo taa. N'ọtụtụ obodo enwere Arab baths ebe ị nwere ike ịnweta ọdịnala oge ochie a na akpụkpọ ahụ gị. Ọ bụ atụmatụ dị oke egwu iji nọrọ n’ehihie izu ụka, zuru ike ma zuru ike na ahụ na uche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Roomgba alụ nwanyị ọhụrụ na nlekọta ahụ ike na Gris oge ochie
Nnọọ, kedu ka ị mere? Ọ dị ka ọ dị mma na ị na-ekwu maka nke a
Zaghachi ka gshcgzc